Jumlada FST Taxanaha Fumed Silicone Rubber Raw Alaab Soo -saaraha iyo Alaab -qeybiye | Fuhsite
Fushite waxay bixisaa laba nooc oo caag silikoon ah oo adag: taxanaha FST-80 iyo taxanaha FST-70. Dhammaantood waa caag silikoon ah oo darajaysan. Waxaa lagu baaraandegi karaa hababka caadiga ah, sida soo -saaridda, cadaadinta iyo wax -ka -beddelka wareejinta, ama wax -ka -duridda duritaanka. Waxay ku daaweeyaan kuleylka waxayna ku habboon yihiin soo saaridda alaabooyin kala duwan oo caag ah oo silikoon ah.
Badeecadaha ku jira taxanaha FST-80 waxay leeyihiin heer sare oo hufnaan, sifooyin jidheed oo aad u fiican & iska caabin huruud ah iyo habsocod wanaagsan, taas oo ka fiican inta badan caag silikoon ah oo suuqa ku jirta.
Alaabooyinka ku jira taxanaha FST-70 waxay leeyihiin hufnaan sare oo kala ah guryaha farsamooyinka aadka u fiican oo ay weheliso wax soo saar sare, oo loo adeegsan karo in lagu sameeyo daahyada iftiinka iftiinka aadka u sarreeya, tuubooyinka darajada caafimaadka
Taxanaha FST-70 ee wax taaj oo kale
Taxanaha FST-70 ee Soo-saaridda
Xogta kore waxay ku salaysan tahay cabbiraadaha soo socda
Ku darista wakiilka dawaynta: 2,5-Dimethyl-2,5-di (tert-butylperoxy) hexane
Xaaladda vulcanization xabbad imtixaanka: 175 × min 5min, xaaladda daaweynta ka dib: 200 × h 4h.
Agabyada soo socda ee la xiriira ayaa la heli karaa, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto
She Xaashida Xogta Badbaadada Maaddada （MSDS） ee Rubber Silicone Fumed
Test Baaritaanka FDA ee Rubber Silicone
HS RoHS iyo Walxaha kale ee Xaddidan ee Imtixaanka Rubber Silicone
● Maaddooyinka Imtixaanka Walaaca Aad u sarreeya （SVHC） ee Silicone Rubber
Ber Waxtarka sare ee Rubber Fumed (TDS)
3. 18ton oo FCL 20'GP ah
S: Ma waxaad tahay shirkad ganacsi ama soo -saare?
J: Kooxda ZheJiang Fushite waa soo saare xirfadle ah oo alaabada silikon-ku-saleysan ku leh Magaalada Quzhou, Gobolka Zhejiang ee Shiinaha in ka badan 30 sano.
S: Miyaad siin kartaa adeegga OEM macaamiisha?
J: Haa, waan awoodnaa
S: Goorma ayaa alaabtu soo rari doontaa lacag bixinta kadib?
J: 7 maalmood gudahood kadib markii la xaqiijiyay lacag bixinta. In ka badan 1 tan, fadlan nala tasho.
S: Waa maxay faa'iidooyinka alaabtaada?
J: Isticmaalka silica qaaliga ah oo tayo sare leh oo buuxinaysa, ma laha ur gaar ah, heer sare oo hufnaan, sifooyin jidheed oo aad u fiican & iska caabin huruud ah iyo habsocod wanaagsan. Waxay ku habboon yihiin alaabada la sameeyay oo waxaa loo adeegsan karaa alaabada fasalka xiriirinta cuntada oo aad looga baahan yahay hufnaan sare, sida: ibta naaska, usha qaniinyada, iwm.
Hore: FST Silica Fumed Silicone caag Cuntada Heerka HTV Silikoon
Xiga: Silicon Rubber HTV Fumed HCR Solic Silicone Rubber Raw
100 Amorphous Silica Saliid
Amorphous Aluminium Silicate
Amorphous Foomka Silica
Foomka Amorphous ee Silica Waxaa La Yiraahdaa
Foomamka Amorphous ee Tusaalooyinka Silica
Amorphous wuxuu soo daayay Silica
Dhiqlaha Silica Amorphous
Lambarka Cas ee Amorphous Silica
Qeexitaanka Silica Amorphous
Cufnaanta Silica Amorphous
Boorka Silica Amorphous
Dharka Silica Amorphous
Bacriminta Amorphous Silica
Amorphous Silica Saliid
Farqiga u dhexeeya Amorphous Silica iyo Quartz
Silica Fumed Iibinta
Silica Fumed ee Cosmetics -ka
Hydrophobic Fumed Silica Iibinta
Amorphous Silica ma Khatar baa
Dhulka Diatomaceous Pure -ka ah ee Amorphous Silica
Silicon Amorphous Silica
Senthetic Amorphous Silica Saliid
Daaweeyey Amorphous Silica
Platinum HTV Silicon Rubber for LED Silicone St ...
Heerka cuntada iyo caafimaadka HTV compone caag silikoon ah ...
Silicon HTV ah oo tayo sare leh oo hufan ...
Platinum Cured Silicone Rubber HTV silico ...
HTV kulaylka u adkaysta sil sil organic HTV ...
Alaabta Kulul, Khariidadda bogga Hydrophilic Fumed Silica, Aerosil 200 Silica Fumed, Aerosil Fumed Silica, Amorphous Fumed Silica,